ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့် အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
(၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ကင်ဘာရာမြို့)
ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်သည် အာဆီယံ-ကင်ဘာရာ ကော်မတီ (ASEAN Committee in Canberra) ၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖိလစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးထံသို့ ၁၇-၁၂-၂၁၀၉ ရက်တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံရုံး၊ ကင်ဘာရာမြို့မှ အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာသံရုံးမှ ဦးဆောင်၍ အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား၊ အာဆီယံသံရုံးအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုခိုင်မြဲစေရန် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများမှ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် The Hon. Scott Morrison နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း၊ Assistant Minister to the Prime Minister and Cabinet ဖြစ်သူ The Hon. Ben Morton နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း စသည့် အိမ်ရှင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ အရေးကြီးသည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထိတွေ့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကင်ဘာရာမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် National Multicultural Festival 2020 အတွက် မြန်မာသံရုံး၊ ကင်ဘာရာမြို့မှ ဦးဆောင်၍ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ ဆိုင်ခန်းများ နေရာချထားခြင်း စသည့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။